Dawladda Djibouti oo ka dhamaan la, Furitaanka Mashaaric waawayn iyadoo shacabka reer Djibouti Yihiin kuwa ugu Saboolsan Geeska Afrika. – Xeernews24
Dawladda Djibouti oo ka dhamaan la, Furitaanka Mashaaric waawayn iyadoo shacabka reer Djibouti Yihiin kuwa ugu Saboolsan Geeska Afrika.
Madaxweynaha Djibouti mudane Ismaciil Cumar Geelle ayaa maanta waxa uu ka qayb galay xaflad lagu furayay Xarunta maalgashiga iyo horumarinta dalka Djibouti.
Xafladaan oo lagu qabtay isla xarunta maanta la furay ayaa waxaa ugu horeyn ka hadlay agaasimaha wakaaladda maalgashiga iyo horumarinta Djibouti waxa uuna sheegay in xaruntan ay ka qayb qaadan doonto shaqo abuurista dhallinyarada dalka iyo horumarka dhinaca dhaqalaha Djibouti.
sidoo kale waxaa goobtaas ka hadlay guddomiyaha rugta ganacsiga Djibouti Yuusuf Muuse Dawaale waxa uuna sheegay inay jiraan dowlado badan oo doonaya inay maalgashi ku sameeyaan waddankan iyo dhammaan geeska Afrika.
Wasiiru dowlaha madaxtooyada Djibouti Cali Geelle Abuubakar ayaa sheegay inay dowladda Djibouti ay diyaar u tahay soo dhaweynta cidwalba oo doonaysa maalgashiga Djibouti.
Gebagabadii xafladaas ayaa waxa ka hadlay madaxeeynaha Djibouti Mudane Ismaciil Cumar Geelle waxa uuna sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay horumarka dhinaca maalgashiga ee wadanku gaadhay.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/03/ville-djib.jpg 192 262 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2017-03-12 17:30:042017-03-12 17:37:59Dawladda Djibouti oo ka dhamaan la, Furitaanka Mashaaric waawayn iyadoo shacabka reer Djibouti Yihiin kuwa ugu Saboolsan Geeska Afrika.
Daawo Aqliga Faysal Ali Waraabe oo aan ogeyn in Hadalkiisa lagu Maxkamadayn... Daawo Xarun cusub oo lagu soo Ururin doono Xogta uu u Baahan yahay dadka wax...